Sirama-Sasm/Dzama Nosy-Be : atao laharam-pahamehana ny siramamy voajanahary | NewsMada
Sirama-Sasm/Dzama Nosy-Be : atao laharam-pahamehana ny siramamy voajanahary
Miarina ny Sirama Nosy Be taorian’ny nandraisan’ny orinasa Sasm-Dzam an-tanana ny fitantanana azy. Ifantohana ny famokarana siramamy voajanahary tsy ampiasana akora simika, hampisongadina ny kalitao sy ny tsirony.
Nahita maso ny fiovana sy fandrosoan’ny orinasa Sirama telo aloha, tantanin’ny Sasm-Dzama, ny Praiminisitra Mahafaly Olivier, ny herinandro lasa teo. Miverina mihodina araka ny tokony ho izy ankehitriny, ny orinasa. Na tsy tao anatin’ny fifanarahana aza, nanampy tamin’ny fandoavana ny karama tsy voaloa tany ny orinasa Dzama. Mitohy koa ny fanavaozana ireo milina, tsy nasiam-panavaozana tato anatin’ny 10 taona. Amin’ny praiminisitra, taratry ny fampandrosoana ny faritra any an-toerana ny fiverenan’ny Sirama mihodina indray, sady manome asa ny mponina.
Hampiavaka ny vokatr’ity orinasa ity ny siramamy voajanahary. Tsy ampiasana akora simika amin’ny famonoana ny bibikely sy ny ahi-dratsy amin’ny fary ambolena. Ahazoana siramamy somary manompo mena voajanahary izany, anisan’ny tena ankafizin’ny mpanjifa, indrindra ny tena mpahay ity lafiny ity.
Hanome lanja ny vokatra sy ny lazan’i Nosy Be izany, ary hampitombo ny fahalalan’ny besinimaro sy ny hafa azy amin’ny lafiny fizahantany.
Niverina ny zotra an-dalamby any Nosy Be
Amin’izao fiverenan’ny Sirama mihodina izao indray, niverina koa ny zotra an-dalamby any Dzamanjary. Azon’ny mpizahatany atao ny mitsidika ny orinasa sy ny mahafantatra ny tantaran’ny fary sy ny siramamy any Nosy Be.
Tsiahivina fa mitantana ny Sirama any Brickaville koa ny orinasa Dzama, miaraka amin’ity any Nosy Be ity. Homeny lanja amin’izany tetikasa izany ny lafiny fambolena, ny indostria, ny angovo, ny tontolo iainana hitondra fampandrosoana ho an’ny toekarena. Toy ny fanamboarana tohodrano mamokatra herinaratra ho an’ny mponina, ny sekoly ho an’ny ankizy, toeram-piofanana teknika ho an’ny tanora hiasa ao amin’ny orinasa atsy aoriana. Maherin’ny 1.000 ny mpiasa horaisin’ny tetikasa.